Andro: 30 Desambra 2019
Fanamboarana milina haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta vokatry ny hatsaram-paritra High State Railway (TCDD) Mpanolotsaina isam-paritry ny lalam-be (TCDD) 2019/613571 GIK isa teo ho eo. [More ...]
Murat Günak dia teraka tao Istanbul tamin'ny 1957. Izy no talen'ny mpamorona voalohany ny Volkswagen sy i Mercedes-Benz. Rehefa nahazo diplaoma tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa tao Istanbul dia nandalina ny famolavolana indostrialy tao amin'ny Hochschule für Bildende Künste (Academy of Fine Arts) tany ivelany i Kassel i Günak. [More ...]
Eskişehir Metropolitan Municipal Fitaterana Taona Vaovao Arahana
Ny Eskişehir Metropolitan Munisipaly dia manohy mijoro amin'ireo olom-pirenena miaraka amina tram fanampiny sy serivisy fanampiny mba tsy hananana olana amin'ny fitaterana amin'ny alin'ny Taom-baovao. Ny alina talata 31 desambra 2019 [More ...]
Tonga seranam-piaramanidina faha-5 amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul faha-XNUMX miaraka amin'ny fahathemorana indrindra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny
Ny oram-be sy ny rivotra mahery any Istanbul dia nisy fiantraikany amin'ny fifamoivoizana amin'ny rivotra koa. Ireo fiaramanidina izay tsy nahazo tany amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul dia tsy maintsy nitsidika ny Faritr'i Marmara. Raha nanangana seranam-piaramanidina Istanbul dia ireo manampahaizana ihany koa [More ...]
Mpiasa 20 izay mihatra amin'ny TÜVASAŞ'a 2 598 no hiditra amin'ny tafatafa 103 izay nofaritana tamin'ny fanaovana sary. Raha ny mpirotsaka hofidina mpiasa mivory ao amin'ny trano ara-tsosialy dia faly be nandritra ny lanonana. [More ...]
Ankara Metros Amin'ny firy no hiasa amin'ny Taom-baovao?
Ny ekipan'ny Kaominin'i Metropolitan dia eny an-tsaha sy eo amin'ny birao amin'ny toerana maro any an-tanàna ka ahafahan'ny mponina ao an-drenivohitra miditra amin'ny Taom-baovao amin'ny fiadanana sy filaminana amin'ny alin'ny Taom-baovao. Ary koa, ANKARAY, Metro ary tariby fiara amin'ny taom-baovao [More ...]
Miditra amin'ny Tram ho an'ny Fampahafantarana
Eo ambany ny fandrindrana ny TransportationPark A.Ş., iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Kajiana Mocopolitan Kocaeli, mpikambana ao amin'ny Aydınlatın Yarını Yarım Youth Platform, kı İlmek İlmek Sevgi Öroruz proj projection, ny satroka ao anaty tram ho an'ireo mpianatra izay mianatra any an-tsekoly tanàna ary manana olana ara-bola. [More ...]
Fangatahan'i Baskan Soyer mankany amin'ny Channel Istanbul
Ben'ny tanànan'i İzmir Metropolitan, Tunç Soyer dia nilaza fa adidin'ny maha-olom-pirenena ny hanohitra ny tetikasan'ny Channel Istanbul ary hametraka ny fanangonan-tsonia ho an'ny talen'ny vondrom-paritany momba ny tontolo iainana sy ny fanavaozana ny fanafoanana ny tetikasa. Mayorzmir Ben'ny tanàna Tunç [More ...]
Ny talen'ny serasera dia handray mpiasa 30 Mpanampy amin'ny serasera mpanampy amin'ny alàlan'ny lohateny hoe Mpanampy momba ny serasera. INFORMATION DINDRAY (1) Ny isan'ny avo indrindra amin'ny mpiasa izay azo tendrena ho Mpanampy amin'ny serasera mpanampy dia 30 (telopolo). Mpandresy amin'ny fidirana amin'ny fidirana [More ...]
Fankasitrahana amin'ny fizahan-tany ririnina, ny "Resort Ski Denizli"
Denizli Ski Center dia nirohotra ho lasa ivon-toerana mahasarika ny fizahantany amin'ny vanim-potoana ririnina Denizli Ski Center, miaraka amin'ny fanokafana ny vanim-potoana ary ireo izay te hankafy ny oram-panala sy ny ski. Kofehy miaraka amin'ny kalitao kristaly [More ...]
Ny serivisy fiara misy eo anelanelan'ny afovoan-tanànan'i Bursa sy i Uludağ dia tsy azo atao noho ny rivotra mahery misy an'i Bursa. Tiorkia manan-danja indrindra ririnina toerana fizahan-tany ara-potoana ho an'ny Ski mpanandratra manome fidirana amin'ny Uludag [More ...]
Ora fanampiny amin'ny ora fanandramana BursaRay amin'ny Taom-baovao
Ny tanànan'i Bursa Metropolitan dia nandray fepetra rehetra mba hiantohana fa afaka mijanona milamina sy milamina ny olom-pirenena amin'ny talata hariva, 2019 desambra sy talata 2020 Janoary izay mampifandray ny taona 31 ka hatramin'ny 1. Tao anatin'ny faritry ny kaominina Bursa Metropolitan [More ...]